Muummichi Ministeraa, Dr Abiyyi Ahmad, rakkoo gama dimokraasii, haqaa fi wolqixxummaan mudhatu furuuf ciminaan ni hojjadha jedha - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Muummichi Ministeraa, Dr Abiyyi Ahmad, rakkoo gama dimokraasii, haqaa fi wolqixxummaan mudhatu...
Muummichi Ministeraa, Dr Abiyyi Ahmad, rakkoo gama dimokraasii, haqaa fi wolqixxummaan mudhatu furuuf ciminaan ni hojjadha jedha
Dr Abiyyi Ahmad, Muummicha Ministera Itoophiyaa ta’uudhaan guyaa adhaa irbuu seene. Haasawa godhee keessatti jijjiirama ummanni biyyattii arguuf yeroo dheeraadhaaf dheebotaa ture argamsiisuudhaaf halkan-guyyaa kan hojjatu ta’uu isaa jala sarareera.
Haasofni Dr Abiyyi dhimmoota ijoo biyyattii qormaataa jiran huda kan tuqe ture. Dr. Abiyyi haasawa isaa guyyaa har’aa guutuu ummata Itoophiyaa fi hawaasa addunyaatiif godheen jijjiiramni dhugaa Itoophiyaa keessatti dhufuun filannoo osoo hin taane dirqama yeroo gafatu ta’u isaa irra deddeebi’ee dubbateera. Keessatuu rakkoo gama dimokraasii, kabaja mirga namaa, haqaa, wolqixxummaa fi hiyyummaa furuuf akka hojjatu waadaa seeneera. Kana dhugoomsuu keessatti ummanni biyyaa fi biyyaan ala jiru, akkasumas paartileen siyaasaa hundaafis wamciha godheera.
Hundi baga gammaddan. Dr Abiyyiif milkaayinaa hawwina.
Dr Abiyyi Ahmad yeroo aangoo Ob. Haylamaaraam irraa fudhatan
Dr Abiyyi yeroo waajjira ministera muummeetti simataman
Dr Abiyyi Ahmad
muumicha ministeraa haaraa
Previous articleDr. Abiyyi Ahmad hoogganoonni paartilee mormitootaa sagantaa muudama isaa irratti akka argamaniif affeere
Next articleMinisterri Muummee, Dr Abiyyi Ahmad, miilaan gadi dhaabachuu fi aangoo isaa cimsachuuf dursa laatuu qaba